मृगौला कसरी स्वस्थ्य राख्ने ? के खाने के नखाने ? जान्नुस् ,घरेलु उपचार विधि – Medianp
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन ३०, २०७५१४:५८
काठमाडौ । मृगौला मानिसहरुको शरिरको प्रमुख अगं हो । यसको अभावमा शरिरको कार्यसञ्चालन हुन सक्दैन् । त्यसैले यदि मृगौलामा रोग लागेमा मानिसहरुको ज्यान समेत जाने खतरा हुन्छ । यो रोग प्राय मानिसहरुमा अस्वस्थ्यकर खानपान , रक्सी तथा चुरोटजन्य पदार्थहरुको सेवन ,कम पानी पिउनाले ,लामो समयसम्म पिसाब च्यापेर बस्नाले लाग्छ । त्यस्तै नुन चर्को भएको खानेकुरा खादाँ हुने उच्च रक्तचापको लापरवाहीले पनि मृगौलामा समस्या आउछ । त्यसैले विचार गर्नुस् ।
मृगौला कसरी सफा गर्ने ?घरेलु विधी
मृगौला सफा गर्नका लागि धनिया एकदमै राम्रो घरेलु विधी हो । यो हाम्रै घरवरिपरी नै पाइन्छ । त्यसका लागी एक मुठ्ठी धनिया ल्याउनुहोस् । त्यसलाई स सना टुक्रा बनाएर काटनुस् । त्यसपछि एक भाँडामा ९ लिटर पानी हालेर उक्त टुक्रा मिसाउनुहोस् । १० मिनेटसम्म यो मिश्रणलाई मज्जाले पकाउनुस् । अब यसलाई छानेर चिसो बनाउनुहोस् । यो त्यसको मिश्रणबाट निस्किएको तरल पदार्थलाई हरेक विहान खाली पेटमा पिउनुहोस् । पिसाबको माध्यामबाट सबै दुषित तत्व बाहिर गई तपाईको अस्वस्थ्य मृगौला सफा हुन्छ ।
तर अझ राम्रोका लागी ज्वानो हालेर खानुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । तर यो घरेलु उपाय मृगौलाको समस्याले धेरै सताएको मानिसहरुमा हुदैन् ।
मृगौला रोगीको के खाने ?के नखाने ?
मृगौला रोगीले मसलेदार, तारेको, बेकरी आइटम, नरिवल पानी, कोल्ड ड्रिक सेवन गर्नु हुँदैन । त्यसका साथै करेला, भिन्डी, बैगुन, पालक, मेथीको साग, मेवा, अंकुरित दाल, बेसन, पापड, अचार, बेकिङ पाउडर खानु हुँदैन ।
मृगौला रोगीले अदुवा र तुलसीको पात मिसाइएको चियामा थोरी मरिच, दालचिनी, सुकुमेल, अलैंची, तेजपत्ता, ज्वानो, ल्वाङको चूर्ण बनाएर बिहान बेलुकी पिउनुपर्छ । यसमा चिया भने हाल्नु हुँदैन । त्यसैगरी सुख्खा रोटी सेवन गर्नुपर्छ । मकै, जौंको सातु सेवन गर्न सकिन्छ । मुला, गाजर, सखरखण्ड जस्ता जमिन मुनी फल्ने र लौका, पत्ता गोभी, परवल जस्ता सब्जी उपयुक्त हुन्छ ।त्यसका साथै कांक्रा, गाजर, मुला, प्याजको सलाद बनाएर सेवन गर्न सकिन्छ ।